ရထားဖြင့်မြောက်ပိုင်းအီတလီအလည်ခရီး | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထား Travel အီတလီ > ရထားဖြင့်မြောက်ပိုင်းအီတလီအလည်ခရီး
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 11/02/2020)
Italy is one of the most popular countries in Europe to visit because of the variety of ခရီးစဉ် ယင်း၏အတွင်း နယ်စပ်. ဒါကြောင့်အီတလီယဉ်ကျေးမှုမှကြွလာသောအခါမြောက်ပိုင်းအီတလီတစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟော့စပေါ့ဖြစ်ပါတယ်, ခရီးသွားများအတွက်မြင်လုပ်ဖို့အဘို့ဤမျှလောက်နှင့်အတူ. ဒဏ်ငွေစပျစ်ရည်ကိုနမူနာကောပေါ်မှာညစာစားရှိမရှိ ကမ္ဘာ့အတန်းအစားအစားအစာ သို့မဟုတ်ရှေးဟောင်းရှာဖွေစူးစမ်း ရဲတိုက် နှင့် ဘုရား, ဤဒေသတွင်ကမ်းလှမ်းမှု ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံများ သငျသညျခစျြလိမျ့မညျဖွစျကွောငျး. မြောက်ပိုင်းအီတလီမှာစူးစမ်းဖို့နေရာများအများအပြားရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးရှိပါက ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ခု အီတလီမှာဖြုန်းဖို့, သင် captivate မှတချို့နေရာတွေမှာတွေ့ရှိရန်ခညျြနှောငျနေကြတယ်. ဤတွင်သည့်အခါသွားရောက်သောနေရာများများအတွက်အကြံပြုချက်များ၏စုံတွဲတစ်တွဲများမှာ ရထားမြောက်ပိုင်းအီတလီနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှ.
Begin your Touring Northern Italy By Train တွင် မီလန်
မီလန်အတွက်မြောက်ပိုင်းအီတလီရန်သင့်အလည်အပတ်ခရီး Begin, ကမ္ဘာ၏ဖက်ရှင်မြို့တော်. အဆိုပါမြို့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Renaissance ဗိသုကာနှင့်ပြည့်ဝ၏, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်အနုပညာကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းအကျင့်ကိုကျင့်. ဧည့်သည်များမှာလည်းဖို့တစ်ရက်ခရီးစဉ်ယူနိုင်ပါသည် အီတလီရေကန်များ နှင့်တောင်ပိုင်း အဲလ်ပ်တောင်တန်း ဒီအလွမြို့ပြကနေဒေသ. မီလန်မှာလည်းမီလန်ဗဟိုမှနေရာဖြစ်သည်, နှင့်အလှဆုံးဥရောပတဦးဖြစ်စဉ်းစားသည် မီးရထားဘူတာ. ဒါကမြောက်ပိုင်းအီတလီသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်စတင်ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
la Spezia မီလန်ရထားမှ
မီလန်ထံမှဗင်းနစ်မှရထားခရီးပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ခုနှင့်တစ်နှစ်ခွဲနာရီ, with plenty of ရှုခင်းရထား ခရီးသွားများအတွက်သင့်ရဲ့ရထားပြတင်းပေါက်ကနေအရမ်းလေးစားမိပါတယ်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျဗင်းနစ်အတွက်မီးရထားဘူတာရုံထားခဲ့ပါယခုအချိန်တွင်ထံမှ, သငျသညျအကွီးအက Grand တူးမြောင်းတစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းကိုဖမ်းနိုင်ပါတယ်, ရေယာဉ်အမျိုးအစားတိုင်းနေဖြင့်ပင်လယ်ကူးမြင်နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ. ဗင်းနစ်၏ဖွင့်ထား 118 တို့ကချိတ်ဆက်ကျွန်းများ တံတားများ နှင့်တူးမြောင်းများကကွဲကွာ. ဒါဟာခမ်းနားမြို့က၎င်း၏လှပမှုအဘို့အကျော်ကြားဖြစ်ပါသည်, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, အနုပညာလက်ရာများနှင့် cobblestone လမ်းများ. ကို Traveller ကူညီဒါပေမဲ့ဒီဝိဇ္ဇာအတတ်အားဒေသနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျမပေးနိုငျ. ရထားမြောက်ပိုင်းအီတလီအလည်ခရီးဗင်းနစ်တစ်ဦးအလည်အပတ်မပါဘဲပြည့်စုံသည်မဟုတ်.
Florence, နာမည်ကြီးခေတ်ဆန်းမြို့, ရုံတည်ရှိသည် ဗင်းနစ်ကနေရထားနဲ့သုံးနာရီ. သင်ဤ destination သို့ရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, နီးပါးတိုင်းအဓိက site ကိုရထားဘူတာမှလမ်းလျှောက်အကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Tuscany ဒေသ၏မြို့တော်အဖြစ်, Florence အံ့သြဖွယ်အစားအစာဝါကြွားခြင်းနှင့် ဝိုင်, နှင့်အတူ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီပြတိုက်. အထင်ကရမြင်ကွင်းများသွားရောက်ကြည့်ရှု, ထို့ပြင် '' ဟောငျးတံတား '' အဖြစ်လူသိများမြတ်သောအပိုတငျး Vecchio အပါအဝင်, အဆိုပါမြင့်မား Florence Duomo နှင့်ဒါဝိဒ်၏ Michelangelo ရဲ့ပန်းပု.
Cinque မှ Terra – ရထားဖြင့်မြောက်ပိုင်းအီတလီအလည်ခရီး
Cinque မှ Terra သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးမှတ်တိုင် Make – ဒီရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဒေသ Florence ကနေရထားနဲ့သာနာရီအနည်းငယ်ဖြစ်ပါသည်. Cinque မှ Terra အဘယ်သူမျှမပြတိုက်သို့မဟုတ်မှတ်သားလောက်ရှိပါတယ် သမိုင်းဝင် ဆိုဒ်များပေမယ့်နဂိုအတိုင်းကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးသောအီတလီ Riviera တစ်ဒီကဗျာအပိုင်းဖြစ်ပါသည်. မြောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှ၏ရက်အကြာမှာ ရထားအီတလီ, ဒီအီတလီနိုင်ငံရဲ့သဘာဝကပျော်မွေ့ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ရှုခင်း. အဆိုပါထူထပ်ကမ်းရိုးတန်းရော့ခ်ကမ်းပါးတစ်ဦးအရောအနှောများနှင့် တော်တော်လေးပျစ်ဥယျာဉ် ငါးလှပဝေးလံခေါင်သီနှင့်အတူ ငါးဖမ်းကျေးရွာပေါင်း.
Reggio Emilia Levanto ရထားမှ
ဂျီနိုအာ Levanto မှရထား
Sestri Levant Levanto ရထားမှ
Parma Levanto မှရထား
အဆိုပါမြို့များမှသာကူးတို့ဖွငျ့ချိတ်ဆက်ထား, တောင်တက်လမ်းခရီး နှင့်သင်တန်း၏ရထားလိုင်းများ. ယင်းကမ်းပါး Explore နှင့် ကမ်းခြေ နှင့်ဆီဖြည့၏တဦးတည်းမှာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကဖေး ဆိပ်ကမ်းအပေါ်စီးကျောက်ဆောင် headlands ပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့. ဤသည် idyllic ဒေသအမှန်တကယ်အသက်ရှု-တာဖြစ်ပါတယ် – re-သရုပ်ြပရန်ပြီးပြည့်စုံသောအရပ်ဌာန. ဒီကနေပြန်သင်သည်သင်၏ခရီးအိမ်မှာစတင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာမီလန်တစ်ဦးရထားယူနိုင်ပါသည်.
သငျသညျရထားမြောက်ပိုင်းအီတလီသွားရောက်ခဲ့ပါ? Let us know the favorite places that you have visited by tweeting us at @SaveATrain! ငါတို့ရှိသမျှသည်လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများအပေါ်လည်းတက်ကြွနေကြသည်, ထွက်ခွာသည် Saveatrain
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထိုအခါ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftouring-northern-italy-by-train%2F – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#cinqueterra အီတလီ မီလန် မြဝတီ travelflorence travelitaly travelvenice